Ogaden News Agency (ONA) – Waa Qofka Mabda’a uu Aaminsan Yahay ee Ma’aha u Dhalasho
Waa Qofka Mabda’a uu Aaminsan Yahay ee Ma’aha u Dhalasho
Posted by ONA Admin	/ August 1, 2014
Waxaa dadka la socda xasuuqa ka socda Gaza ay aad ula yaaban yihiin dalalka Carabta meesha ay ka muuqdeen. Waxaa aad loola yaabay marka ay dawlada ka mid ah Latin America ay safaaradaha kasoo qaateen Israaiil iyagoo aad uga xumaaday xasuuqa naxariisdarada ah ee akhlaaqda dagaalka ka baxsan ay ku hayaan shacabka wax walba laga cuna-qabateeyay ee hadana la leeyahay iska celiya dawladdii ugu xooga badnayd Bariga Dhexe ahna dawladda 4aad xagga cududda ciidan.
Hadda ka hor ayuu Sayid Maxamad ka dayriyay hiilada Carabta markay qaar ka mid ahaa lajnada –Qusuusiyiinta – kula taliyeen inuu walaalaha Carbeed taageero weydiisto maadaama uu cadawga ku soo qaaday dagaal kulul oo rasaastii iyo saanadii kalena ay gabaabsi ka gashay. Sayid Maxamad wuxuu bixiyay Jawaab dhaxagal ah oo sawir fiican ka bixisay Carabta waxa ay yihiin. Wuxuu yidhi sayidku;
– Cudud ma leh col kula weerar gala, ciidan iyo xooge
– Inkastey cid kuu soo diraan, waa cidloo kale
– Caloosha iyo madaxay sidii, dumar cantuugaane
– Maandhoow cayaayirka iga daa, Carabi waa naage
Waxaa hubaal ah haduu Sayidka maanta noolyahay inuu odhan lahaa –Way ka liitaan Naagaha e – sababtoo ah gabdhaha Gaza iyo gabdhaha Ogadenya dagaalka iyo halganka ay wadaan shacabkooda waxay ka yihiin hormuud, meesha ay rag badan oo waliba sheeganaya culumanimo ay cumaamadahii la rabay inay madaxa ku duubtaan ay wajiyadooda ku qariyeen.
Arintu waa mabda’a uu aaminsanyahay qofkasta ee ma’aha mabda’a uu aabihiin aaminsanaa. Qofka aadanaha ah, ama Carab ha ahaado ama jinsi kale ha ahaadee haduu u noolaado sida xoolaha oo calooshiisa iyo wax aka hooseeya uu kala qiimi bato mabda’a iyo diinta uu aaminsan yahay waxaa hubaal ah inuu hoos uga dhacayo xayawaanka xataa siduu Ilaahayba tilmaamay –Ulaaika Kal Ancaami Bal Hum Adallu Sabiilaa – ayuu ku sheegay Ilaahay kuwa noocaa ah een lahayn mabda’a.
Madaxweynaha Bolivia iyo saaxiibadii waxay ka run sheegeen mabda’a ay aaminsan yihiin ee ku dhisan cadaaladda shucuubta iyo xoriyadda, meesha ay madaxdii Carbeed, gaar ahaan kuwii lahaa shariicada ayaan ku dhaqanaa ay Yuhuuda lasoo safteen si loo laayo masaakiinta Gaza, sida uu ka warbixiyay qoraaga caanka ah ee Robert Fisk in dawlada Carbeed ay ka codsadeen Yahuuda inay tirtiraan Xamas oo iyagu ay bixiyaan kharashka kaga baxa dagaalkaa.
Halkan waxaad ka akhrisaa maqaal ka xogwaramaya in afar dal oo Carab ah ay ku wehliyaan dagaalka, Israaiilna loo wakiishay arintan. Halkan ka Akhri.
Waxaan taaganahay xaalad aad u qalafsan oy adagtahay in la fahmo waxa ku dhacay madaxda Carbeed oo waayadii hore ugu yaraan dhawaaqa ku kaalmayn jiray reer Falstiin oo maanta si cadaan ah ula soo saftay cadawgoodii shalay.
Tolow ma cudurkii Somalida ayaa u gudbay, mise iyaga ayuuba nooga yimid cudurkan.